Izimoto zeVolvo bezilokhu zihlotshaniswa nokuhlakanipha, ukuthula nokuvumelana. Futhi futhi ukukhathazeka ngokuphepha nokuthembeka ngokweqile. "I-Volvo C40" iboleka ngaphandle izici ezithile ze-flagship C80, kodwa igcina ukubukeka komdanso womndeni - okungabizi kakhulu futhi okunokwethenjelwa. Buyekeza i-C40 - kamuva kulesi sihloko.
Imoto "Volvo C40" yaqala ukuthunyelwa ngo-1995, kodwa ngaleso sikhathi wayegqoka inkomba yeC4. Ngokushesha kushintshile, ngoba cishe ngesikhathi esifanayo inkampani ethi "Audi" yaqala ukukhiqiza imodeli efana negama elifanayo. Isizukulwane sokuqala se-C40 sakhiwe esiteshini esifanayo njenge-Mitsubishi Charisma, kodwa ukuthandwa okwakulindeleke ngaleso sikhathi kwakungekho. Amamodeli emzimbeni wesiteshi esiteshini athola indebe ye-V40. Isibonelo sokuqala sokuphumula i-C40 sasiyi-2004, inqola esiteshini yabizwa ngokuthi i-V50, futhi imoto yaba yinkampani ye-soplatform namamodeli adumile e-Ford Focus yesizukulwane sesibili ne-Mazda 3, owokuqala. Ngenxa yalokho, imininingwane engu-60% iyashintshashintsha. Abaningi basalokhu bebiza lo mfanekiso inguqulo ebiza kakhulu ye "Ford Focus". Ngempela, kwangaphandle zifana nesayizi, izimoto kanye nezimfanelo zabathengi.
Ukubuyisela emuva ngo-2007
Ngonyaka ka-2007, uVolvo wagcwalisa ukubuyiswa kwesibili kwe-C40, emva kwalokho imoto yaba yinto ethandwa kakhulu. Ngaleso sikhathi lonke uhlu lwezinkampanini zenkampani lwalubuyekezwa, olwenziwe ngesitayela esisodwa sebhizinisi. Zonke zafana nokubukeka okufanayo, kepha ngayinye inezinto zayo, ukungezwani okubonakalayo. KuVolvo S40 II, izakhi eziningi ziye zanamuhla. Lona ama-bumpers avuselelwe, igrile, izibani. Ngaphambi kwamapayipi wokukhipha aguquliwe, futhi izibani zathola izakhi ze-LED. Ephakathi kwezimoto uye wathola izinguquko eziningi - ukuklama kwangempela ngesitayela se-hi-tech sekuye kwazwakala amakhasimende amaningi. Yini eyayidinga i-Ribbon kuphela ye-console isikhungo! Ezinye izakhi nazo zenziwe zanamuhla. Ngakho-ke, ohlelweni lokuphepha olusebenzayo, ukulawula izindawo eziyimpumputhe ezibukweni zangemuva ezibukwayo kanye nokukhanya okukhanyayo kwengeziwe. Phakathi kwemikhakha yokuphepha okungeyona emotweni imasipha eqinisekisiwe ye-salon, ukuvikela kangcono abagibeli ezivela ku-traumas sekusetshenzisiwe. Kuleli fomu, imodeli yayikhona ebhanini lokuthutha kuze kufike ngo-2012, ngemuva kwalokho lafakwa esikhundleni se-V40.
Iyunithi enkulu "Volvo C40" - injini ye-cylinder engama-1.6, eyabe ifakwe kwi "Ford Focus 2". Lokhu kuyindala ngokwanele, injini eqinisekisiwe. Isisetshenziswa saso ngokulondolozwa ngesikhathi esifanele futhi esifanele singafinyelela amakhilomitha ayizinkulungwane ezingu-500. Isikhathi sokushayela kulolu bhande lokushayela, futhi kufanele sishintshwe njalo ngamakhilomitha ayizinkulungwane ezingu-80. Izinamathiselo ziqala ukuphuma futhi zenqaba cishe izinkulungwane eziyikhulu. Inkinga yokwehluleka kwemishini nokunciphisa njalo ukuphila kwezimoto kanje: imoto ngokwayo isindayo kakhulu, futhi ukuze kugcinwe izinga elihambelanayo lokunyakaza, kuyadingeka ukuba ungayinaki imoto, ngakho-ke, kufanele ibe ngaphansi kwemithwalo enzima.
Bonke abanye ababusi
Okulandelayo ekuholeni yizinjini ezine-1.8 no-2 amalitha (140 no-150 hp ngokulandelana). Lezi zinjini nazo zifakwe kwi "Ford" ne "Mazda". Iyunithi ihlala isikhathi eside kakhulu futhi ingathobeki. Ukugcinwa kwamandla kwanele ukuhamba okunamandla. Indlela yokusabalalisa igesi ine-chain drive futhi ihlala ingapheli. Izimoto ezinokufakwa okunjalo zihlangana, ngeshwa, azivami ngokwanele. Izinjini zakudala ziyi-in-line ezinhlanu-cylinder injini. Umthamo wokulinganisa wama-2.4 amalitha unamandla angu-170 amalitha. Nge. Le injini, ngenxa yokuklama kwayo engavamile, iyabiza kakhulu ukugcina futhi inezifo zokubeletha. Izimvo zabanikazi ziphawula uhlelo olusheshayo lokubhebhezela ukushisa kanye ne-crankcase ventilation. Injini endala kunazo zonke ze-Volvo C40 iyinjini ye-2.5-litre turbocharged ene-horse power 220. Leyunithi yamandla nayo ayithandwa kakhulu eRussia ngenxa yinkimbinkimbi nezindleko eziphezulu zokugcinwa. Izimoto ezinjalo zazikhiqizwa phambili kanye nazo zonke izondo.
Kusukela ngonyaka ka-2007, i-Volvo S40, evuselela ukuthakazelisa, isithole injini kuyi-Flexifuel version, engasebenzisa ingxube ye-bioethanol nephethiloli. Ngokusemthethweni, leyo moto ayizange ifakwe eRussia. Futhi "i-Volvo C40" yakhiqizwa ngezinjini ze-diesel, kodwa ayithandwa kakhulu eRussia ngenxa yobuzwe besistimu yezinto zokushisa kuze kube nekhwalithi yamafutha e-diesel asekhaya. Ngaphezu kwalokho, idizili "Volvo" futhi ngaphandle kwalo libiza kakhulu ekugcinweni. Emakethe yesibili, akajabuli ukuthandwa.
Ukuthunyelwa "i-Volvo C40"
Izinjini zazihlanganiswa ngamabhokisi egijimini ezenzakalelayo futhi ezizenzakalelayo. Izinyathelo ze-1.6 no-1.8 amalitha zinomshini "wezingcingo" kuphela, futhi zazihlukile ekuklanyeni. Okukhethwa kukho injini ye-horse-125 kwakuyi-design eqinisekisiwe. Amabhokisi amashini anokwethenjelwa, futhi azikho izikhalazo ezibhekene nazo. Lokhu kuphawulwe ngempendulo yabanikazi. Amabhokisi okuzenzakalelayo nawo athembeke kakhulu futhi azibonakalise kwamanye amamodeli we-Volvo. Imithombo yabo ifinyelela amakhilomitha ayizinkulungwane ezingama-300, ngaphansi kwesimo sokushintshwa kwamafutha njalo njalo ngamakhilomitha angu-60 000. Uma kungenjalo, kukhona ukushisa okukhulu kwezingxenye kanye nokuhluleka kweyunithi ye-hydraulic - isici esabiza kakhulu futhi esiyinkimbinkimbi kunoma yiliphi ibhokisi lokuzenzekelayo elizenzakalelayo.
Ngokuzikhandla i- chassis yendabuko yaleli klasi. Ukuthwala umzimba, nge-subframe yangaphambili nangemuva, ukumiswa kwangaphambili - uMcPherson uphawula. Ngemuva kokwakhiwa kwezixhumanisi eziningi. Uhlelo luyaphinda ngokuphindaphindiwe leyo yemoto "Ford Focus 2", futhi imininingwane ihlanganisiwe. Ngokusho kwabanikazi, ukutshalwa kwezimali okunzulu emhlanganweni onjalo ngokuhamba ngokucophelela kuyodingeka kuphela emva kwamakhilomitha ayizinkulungwane eziyikhulu. Ama-struts nama-hinges of stabilizer, ama-block blocks we-lever, ama-bearings we-hub afanele ukushintshwa. "I-Volvo C40" ifakwe i-hydro noma i- electric power steering, engadinga ukungenelela ngekhilomitha yokuqala eyizinkulungwane ezingu-200.
Inkampani "Volvo" ayishintshi ngokwayo emasikweni. Izingxenye zomzimba zezimoto zayo ziqinile kakhulu. Ukungcola akusho nje ukuthatha le nsimbi. Isizathu silula: iSweden yizwe elinesimo sezulu esibucayi, futhi ukumelana nesimo sezulu kuyadingeka. Okuhlukile kuphela imoto ephuthumayo. Ukuba khona kwemfucuza kubonisa ukuthi useyingozi futhi abuyiselwe izinga eliphezulu kakhulu.
I-Volvo C40 emakethe yesibili
Izimoto zalolu hlobo zihlale zidingwa emakethe yesibili naphakathi kwamayunithi amasha. Isizathu salokhu yizingxenye eziyingqayizivele: ukuthembeka, ukuqina, ukuphepha, induduzo. Zonke lezi zingxenye kunoma iyiphi imoto yeVolvo iphelele. Noma kunjalo, lawa ma-pluses kwakudingeka akhokhwe, futhi kakhulu. Kungenzeka ukuthi usho amagama ajwayelekile okuzo zonke izinhlobo ze-brand: izindleko eziphezulu zezingxenye ezisekelwe kanye nensizakalo, ukuthengwa kwemali ephansi emakethe yesibili. Ukulungisa i-Volvo S40 nge-mileage enkulu kunganciphisa amathuba okuthola imali.
Amanani wezimoto nezingxenye zokungcebeleka
Ku-Volvo S40, intengo izoba ngokushesha kunezimoto ezifanayo zesigaba esifanayo. Ngokwesilinganiso, imoto ka-2008 enenjini ye-1.6 (ethandwa kakhulu) kanye nebhokisi lomshini iyobiza kusuka kuma-ruble angu-430 kuya ku-660 ayizinkulungwane. "I-Volvo" ngo-2012 ene-2 litre injini kanye nokudluliswa okuzenzakalelayo kuzobiza ama-ruble angu-650-750 ayizinkulungwane. Izingxenye zokungcebeleka (Volvo C40), njengezinye izimoto zangaphandle, ziyiziqalo futhi zingezona ezivamile. Noma kunjalo, bobabili abahlukaniswa ngamanani aphansi. Ngakho-ke, ama-absorbers ama-shock ama-ruble ama-5-6 ayizinkulungwane, ama-discs kanye nama-pads - ama-3-5,000, isiphequluli-kusuka ku-5.5 kuya kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-23. Kodwa-ke, njengoba sekushiwo kakade, ukulungiswa okujulile nokutshalwa kwemali kuzodingeka ngemuva kokuhamba ngamakhilomitha ayizinkulungwane eziyikhulu.
Izimpendulo zabanikazi mayelana ne- "Volvo"
Izimoto zaseSweden azikho eziningi kakhulu, kodwa iqembu elibalulwe ngabalandeli, kuhlanganise nabaningi bamothuthuthi bethu basebenzela imoto ye-Volvo C40. Ukubuyekeza kwalo mshini kufakwe njengokwethenjelwa ngokweqile, okuqinile futhi okulula. Phakathi kwezimpahla zabanikazi bezimoto bayiqaphele ingaphakathi elithambile, ukuchichima kokulungiswa kwezihlalo kanye nokulula kwabo, izinhlobo ezihlukahlukene zezinhlelo ze-elekthronikhi (kuye ngokuthi imishini), ukwenza lula nokwenza induduzo. Futhi, abanikazi banakekele ukusebenza okubushelelezi nokwethenjelwa kwe-injini nebhodi legiar, ukushisa okusheshayo kwe-injini ebusika, ukudweba okunamandla nokukhipha umsindo omuhle. Ngokuvamile, yonke imoto yenza umqondo womkhiqizo ohlangene futhi othembekile.
Phakathi kokungalungi kwabanikazi bakhulume izingxenye ezithengiwe ezishiwo kakade zeVolvo S40, indawo encane yokumiswa kanye nokumiswa okwesikhashana. I-salon yenziwa kakhulu ngekhwalithi, kodwa ngesikhathi esifanele iqala ukwenza. Kodwa lezi zikhilikithi aziveli maduzane (emva kweminyaka eyishumi noma ngaphezulu, okuhle kakhulu).
Ngokuvamile phawula ukusebenza okungathembeki kwewindi lamandla emnyango womshayeli kanye nokuqhwaza kwama-windshield wipers. Kodwa lokhu kwenzeka kuphela kwiqhwa elibi nangemva kokugeza. Ayikho imoto eyodwa eqinisekisiwe ngalokhu.
Ukufingqa, singasho ukuthi "i-Volvo C40" yisibonelo somoto onokwethenjelwa, oqinile futhi okhululekile. Umshini ugcwalisa kahle injongo yayo futhi unikeza imizwelo emihle kuphela. Into kuphela okufanele ikhokhwe ngokukhethekile isimo somzimba. Ungathengi iVolvo, yakhiwe kabusha ngemuva kwengozi. Ngisho nokulungiswa kwekhwalithi eliphezulu akukwazi ukuqinisekisa isivikelo esinjalo ngokumelene nokubola, njengomkhiqizi.
Vaz 2121. Umlando impumelelo
TACHOWELLE futhi esikhundleni sakhe
Yasebhange Plastic: kanjani ukuthola inombolo ye-akhawunti ikhadi sika
Ogwini best of the Dominican Republic: i Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza
Ngo Kuvalwa abaningi kamasipala. Moscow ukusebenza kamasipala. Operating imodi kaMasipala Petersburg
Qaphela: Autism e ingane! Izimpawu kanye impendulo abazali
Iyini i-ejenti oxidizing nendlela esetshenziswa